Features: 100% Eco-ushamwari zvinhu Safety non-hunokachidza pamusoro kupenda kuedzesera kutamba matoyi kufuridzira mbudzana kuti akangwara OEM kuti ari kutambirwa Mookids Toys Co. iri muna Ningbo Chian, iro rine anopfuura vamwe pachii jogirafi, kukurukurirana. boka redu specialized muvana matoyi uye mwana zvigadzirwa. Tinoitawo zvakanaka zvinhu zvakafanana zvigadzirwa, mitengo, yokutengesa We akupe kwete chete zvakawanda sarudzo uye mapfupi pakukurukura nguva, asi zviri nani zvigadzirwa nemutengo uyewo isu pachokwadi W ...
Tinogamuchira pachokwadi iwe kushanyira boka redu panguva www. mookidstoy .com mokurukura mabhizimisi, kutarisira kuvaka kwenguva bhizimisi ukama nemumwe.
1, Educational matoyi: emapuranga mufurati, emapuranga dambanemazwi, vana toyi mutambo, easel, marozari matoyi, Mushosho, nepakati bhasikoro, matoyi mwana, motokari matoyi, emapuranga motokari, chitima chitoyi, ndege chitoyi, emapuranga chitundumuseremusere, matoyi mimhanzi.
2, anobatsira Teaching: Montessori zvinhu, Froebel, uye dzimwe dzidziso zvokuvakisa.
3, nyengedza kutamba matoyi: matoyi kicheni, kumurimi chitoyi, fenicha matoyi, emapuranga mudhori imba, muriwo matoyi.
4, Preschool Furniture & nhandare: Vana mubhedha, dhesiki, cheya, tafura, cabinet, indoor uye panze nhandare nezvimwe matoyi.
5, promotional chipo matoyi: emapuranga yoyo, kendama, dhonzai pamwe zvokutambisa, etc.
6, OEM / ODM zvebhizimisi akafadza.
Njere rokudzidzisa ABC inoratidza tsika 3d dambanemazwi DIY chitoyi yemapuranga kutamba jigsaw puzzle
** Trade izwi: EXW, FOB, CNF, CIF
** Loading chengarava: Ningbo / Shanghai
** zvacho: By gungwa, By mhepo, By taura
** Pament izwi: T / T 30% dhipoziti pamberi kugadzirwa uye 70% mwero pamusoro B / L kopi; 100% hazvishandukiL / C pa kuona; Paypal; Western Union;
** nguva Mharidzo: approx 7-14days
** Delivery nguva: 40-55 mazuva
** Product Warranty: We pave zvigadzirwa vatengi vakagamuchira vakakodzera. Kana akaputsika zvikamu, pls titumirei uchida mapikicha kubudikidza email, uye ipapo isu ndichatuma kwauri kutsiva maererano ezvinhu chaiko.
** sei kudzivirira kodzero yedu pashure kushanda nemi?
Kusaina nda, kudzivirira magadzirirwo wako urege kuzoitengesa vamwe; For makuru varayirwa, isuwo
dzinobvumirana kusaina chibvumirano, izvo isu chete kuita zvinhu kuitira kambani yenyu.
** Ko zvinhu zvakatipoteredza? Unogona kupa FSC zvinhu? Professional uye certificated zvinhu zviri zvinobatsira akatorwa kubva 2008. wese mwedzi tinotumirachaiyo batch mangé pendi kuna SGS testings. Tinewo kwedu chigadzirwa chengetedzo Labs.
FSC wakatangwa kubva 2010 uye zviri kuwanikwa musika UK. Saka kuri kuwanikwa
wana ne 10% kudhura kupfuura Commons.
** Une vamwe vatengi vari America / Europe? Ndezvipi vatengi? mutengi yedu yose nyika apo Europe uye America ndivo zvaunokoshesa, kufanana Disney,Target, Toys R, Hasbro mu America; Studio100, JMD, Metro, achirera Ikea mu Europe,
Tinogara tine bhizimisi ukama navo.
Previous: Motokari Puzzle With Wheel
Custom kutamba jigsaw Puzzles
Funny kutamba jigsaw puzzle
Iq Training kutamba jigsaw Puzzle
kutamba jigsaw puzzle Board
kutamba jigsaw puzzle Mini
Inovhiringidza Board Educational toy
Puzzle kutamba jigsaw
Rainbow Wooden toy kutamba jigsaw puzzle
Round kutamba jigsaw Puzzles
Vehicles Wooden mbambo Puzzle
Wood 3d kutamba jigsaw puzzle
Wooden kutamba jigsaw puzzle
Wooden Toy kutamba jigsaw puzzle